ကျွန်​မမျော်​လင့်​ခဲ့​သော​နိုင်ငံ​ခြား​အပိုင်း(၁) | J-Myanmar
phyo — Oct 23, 2014
ကျွန်မ လူ​လား​မ​မြောက်​ခင် အရွယ်​ကတည်းက .. အမေ​ရိ​ကား​မှာ​နေ​တဲ့ အဖိုး​လေး​က မြန်မာ​ပြည် ပြန်လာ​တိုင်း .. မေမေ့ကို​ပြော​တယ် .. “ငါ့​မြေး​မ​လေး​ကို အမေ​ရိ​ကား​မှာ ကျောင်း​တက်​ခိုင်း​ဖို့ အခု​ကတည်းက Well-Trained လုပ်​ထားနော် … TOEFL ဖြေ​ခိုင်း​ရ​မယ် … စာ​လုပ်​ချင်​စိတ်ရှိ​အောင် အမြဲ​ကျင့်​ထား​ပေးနော်” … ဆို​တဲ့ စကားလုံး​တွေ​ဟာ .. ကျွန်မ​ရဲ့ မ​သိ​စိတ်​ထဲ​မှာ နေရာ​ယူ စိုး​မိုး​ထားခဲ့​တယ် ထင်​ပါ​တယ်။
ဒီ​လို​နဲ့ ကျွန်မ ၁​၉⁠၉​၇ ခု​နှစ်​မှာ ဆယ်​တန်း​စာ​မေး​ပွဲ​ကို ဒ​ဂုံ(၁)က​နေ ဂုဏ်​ထူး​တွေ​နဲ့ ထူးချွန်​စွာ အောင်မြင်​ခဲ့​တယ်။ အောင်​စာရင်း​ထွက်​ပြီး⁠ပြီး​ချင်း .. Study Guide လာခေါ်​လို့ ပိုက်ဆံ​လည်း​ရ​တယ် ကုသိုလ်​လည်း​ရ​တယ်​ဆို​ပြီး စာ​သင်​တာ (သူ​များ​ကို ဆရာ​လုပ်​ရ​တာ) ဝါသနာ​ပါ​တဲ့ ကျွန်မ ၁​ဝ​တန်း ကျောင်းသား​တွေ​ကို အိမ်​လိုက်​ပြီး စာ​ပြ​ခဲ့​တယ်။ ပထမ တစ်​နှစ်​လောက်​တော့ အပျင်း​ပြေ​လုပ်​မယ်​လို့ စိတ်ကူး​ထားခဲ့​ပေ​မယ့် .. ကျောင်းသား​တွေ​နဲ့ စာ​အတူတူ လိုက်​ကျက်​ပေး​ရ​တာ ရှင်း​ပြ​ရ​တာ​ကို ဝါသနာ​ပါ​တဲ့ ကျွန်မ ၂​၀⁠၀​၂ ခု​နှစ် (၁​၀)တန်း​ကျောင်းသား​တွေ အထိ စာ​ပြ​ခဲ့​ရ​တယ်။
ကျွန်မ​ငယ်​စဉ်​ကတော့ အသက်(၁​၇)မှာ ဆယ်​တန်း​အောင်​ရ​မယ်။ အသက်(၂​၀)-(၂​၃) လောက်​မှာ ဘွဲ့​တစ်​ခု⁠ခု​တော့ ရ​နေ​ရ​မယ် .. အသက် (၂​၅)မှာ ကိုယ့်​လမ်း​ကိုယ်​ဖောက် ကိုယ့်​လမ်း​ကိုယ်​လျှောက်​တဲ့ အလုပ်​တစ်​ခု⁠ခု​ကို လုပ်​နိုင်​တဲ့ မိန်း​ကလေး တစ်​ယောက်​ဖြစ်​ရ​မယ်​လို့ Future Life Plan တွေ ချခဲ့​ဖူး​တယ်။
တစ်​ကယ်​တမ်း အဲ​ဒီ FLP တွေ​ဟာ .. လက်တွေ့​ကျ​ကျ ဘဝ​ကို ရင်ဆိုင်​ဖြတ်​သန်း​ရ​တဲ့ အခါ​မှာ​တော့ သတ်​မှတ်ထား​တဲ့ ခု​နှစ် အချိန်​ကာလ​တွေ​မှာ ကွက်​တိ ဖြစ်​မ​လာ​နိုင်​ဘူး​ဆို​တာ ကျွန်မ သိ​ခဲ့​ရ​တယ်။
– ကျွန်မ​တို့ ၁​၀ တန်း​အောင်​ပြီး နိုင်ငံ​ရေး အခြေအနေ​တွေ​ကြောင့် တက္ကသိုလ်​ကျောင်း​တွေ ပိတ်​ထား​တာ (၃)နှစ် ၊ အသက်(၂​၀)မှာ ဘွဲ့​ရ​တစ်​ယောက်​ဖြစ်​နေ​ရ​မယ့် ကျွန်မ …. အသက်(၂​၀)မှာ​မှ တက္ကသိုလ် ဆို​တာ​ကို ခြေ​ချ​ခွင့်​ရ​ခဲ့​တယ်။ အဲ​ဒီ​မှာ ပထမ​အလွဲ စ​ပြီ ~~
– တက္ကသိုလ်​တွေ ပိတ်​ထား​ဆဲ​ကာလ​မှာ မေမေဟာ ကျွန်မ​ကို အနား​မ​ပေး​ဘဲ .. ရှိ​သ​မျှ ကွန်​ပြူ​တာ​သင်​တန်း ၊ အင်္ဂလိပ် စကားပြော​သင်​တန်း ၊ သိ​သင့်​သိ​ထား တတ်​သင့် တတ်​ထား​သင့်​တဲ့ သင်​တန်း​ကျောင်း​တွေ ၊ Private English School တွေ​ကို တက်​ခိုင်း​ထားခဲ့​တယ်။ TOEFL ဖြေ​ဖို့​လည်း မ​ဖြစ်​မ​နေ ကျွန်မ ကျူ​ရှင်​တွေ​တက်​ပြီး ဖြေ​ခဲ့​ရ​တယ်။
ကျွန်မ​အတွက် ပညာ​ဝမ်းစာ ဖြည့်​ပေး​ခဲ့​တယ် ဆို​တာ နိုင်ငံ​ခြား​ရောက်​မှ သိ​တယ် ~~
– အသက်(၁​၉)-(၂​၀)လောက်​မှာ MODEL တွေ ခေတ်​စား​တော့ မော်​ဒယ် လုပ်​ချင် တယ်​ဆို​တဲ့ ရောဂါ​ထ​ခဲ့​ဖူး​တယ်။ မေမေ့​ဘက်​က မျိုး​ရိုး​ထဲ​မှာ အနု​ပညာ​လုပ်​တာ တစ်​ယောက်​မှ မ​ရှိ​တော့ (သဘင်သည် ဖက်ခွက်​စား) အလုပ်​တွေ ဝါသနာ ပါ​ရသ​လား​ဆို​ပြီး မေမေ့​အမေ (အဖွား​မြ)က ကျွန်မ ဓါတ်​ပုံ “အပျိုစင်”မဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံး​ရှင် အဖြစ် စ​ပြီး ပါလာ​တဲ့​အခါ စိတ်ဆိုး​ပြီး သားအမိ နှစ်​ယောက်​စလုံး​ကို အိမ်ပေါ်​က နှင်ချ​တာ​လည်း ခံ​ခဲ့​ရ​ဖူး​တယ်။ အဲ​ဒီ​မှာ ဒုတိယ အလွဲ စ​ပြီ ~~
– မော်​ဒယ်​ရောဂါ အနု​ပညာ​အလုပ် ဓါတ်​ပုံ​ရိုက်​တယ်​ဆို​တာ ပိုး​မ​ဝင်​ခင်​တား​လို့ ရ​နိုင်​ပေ​မယ့် ၊ ပိုး​ဝင်​သွား​လို့​ရှိ​ရင် တား​ဖို့​ရန် အတော်​ခက်​တယ်​ဆို​တာ ကျွန်မ ကိုယ်​တွေ့​မို့ .. မေမေဟာ ပါး​နပ်​တဲ့ မိ​ခင်​ပီပီ ကျွန်မ ဝါသနာ​ပါ​တဲ့ မဂ္ဂဇင်း ဓါတ်​ပုံ​ရိုက်​ခံ​ခြင်း ၊ မော်​ဒယ် ဓါတ်​ပုံ​ရိုက်​ခံ​ခြင်း​များ​ကို လိုက်လျော ခွင့်​ပြု​ပေး​ခဲ့​ပေ​မယ့် … ကျွန်မ​ကို အမေ​ရိ​ကား​ကို ကျောင်း​သွား​တက်​ဖို့ TOEFL ဖြေ​ပါ့​မယ်​ဆို​တဲ့ ကတိ​နဲ့ .. GIVE & TAKE လုပ်​ယူခဲ့​ကြ​တယ်။
– TOEFL သင်​တန်း​တွေ​တက်​ရ​တယ်။ HORIZON INTERNATIONAL SCHOOL လို​မျိုး အင်္ဂလိပ်​ကျောင်း​တွေ​မှာ (INTERMEDIATE) အတန်း​က​စ​ပြီး အင်္ဂလိပ်​စာ​ကို ပြော​နိုင် ရေး​နိုင်​ဖို့ ပြေး​တက်​ရ​တယ်။ လှည်း​တန်း ဦး​ဝင်း​နိုင် (အင်္ဂလိပ်​စကားပြော​သင်​တန်း​ကျောင်း) ကို​လည်း မနက်​အစောကြီး အတန်း​ကို အိပ်​ချင်​မူး​တူး အပြေးအလွှား နေ့​တိုင်း​တက်​ခဲ့​ရ​တယ်။ LCCI , CALCULUS , PROGRAMMING တွေ​ဟာ​လည်း အမေ​ရိ​ကား​ကျောင်း​တွေ​မှာ သင်​မှာ​ဖြစ်​လို့ .. ဟို​ရောက်​မှ တစ်​လုံး​မှ မ​သိ​ဘဲ အူ​လည်⁠လည်​ဖြစ်​နေ​မယ်​ဆို​ပြီး မေမေ​က သင်​တန်း​တွေ အကုန်​တက်​ခိုင်း​ခဲ့​တယ်။
– ကျွန်မ​ကို မေမေ​ကိုယ်တိုင်​က​လည်း ယုံကြည်​တယ်။ ကျွန်မ​ကိုယ်တိုင်​က​လည်း Self-Confidence အပြည့်​ရှိ​တဲ့​အတွက် … အမေ​ရိ​ကား​ကျောင်း​က ကျောင်း​ဝင်​ခွင့် လက်မှတ်​ရောက်လာ​တဲ့​အခါ​မှာ US Embassy ကို ယုံကြည်​မှု​ရှိ⁠ရှိ​နဲ့ အင်တာဗျူး ဝင်​ခဲ့​တယ်။
– အမေ​ရိ​ကန် သံ​ရုံး​ဟာ ဘယ်လောက်​တောင် ပဲ့​သလဲ​ဆို​ရင် အင်တာဗျူး​ဝင်​တဲ့ သူ​တွေ​ကို ထိုင်​စရာ ထိုင်​ခုံ​တောင် မ​ပေး​ဘဲ ကျွန်မ​တို့ VIsa လာ​လျှောက်​တဲ့​သူ​တွေ​အားလုံး မတ်​တပ်​ရပ်​ပြီး Consular မေး​သ​မျှ​ကို ဖြေ​ခဲ့​ရ​တယ်။ ကျွန်မ​ကို အင်တာဗျူး​မှာ Consular က မေး​တယ် ..
“မင်း​သွား​တက်​မယ့် ကျောင်း​နဲ့ ဘာသာ​ရပ်​က (၃)နှစ်​ခွဲ​တောင်​ကြာ​မှာ .. College ပြီး​ရင် မင်း​ဘာ​ဆက်​လုပ်​မ​လဲ” .. တဲ့ ..
မိ​ရွှေ​သက်​တို့​က​လည်း ချက်ချင်း​ပြန်​ဖြေ​လိုက်​တယ် .. “College ပြီး​ရင် University ဆက်​တက်​မှာ​ပေါ့” .. လို့
“အင်း ကော​လိပ်​က (၃)နှစ်​ခွဲ ၊ တက္ကသိုလ်​က (၃)နှစ်​လောက် ထပ်​ကြာ​မှာ​ဆို​တော့ မင်း ငါ​တို့ နိုင်ငံ​မှာ အကြာ​ကြီး​နေ​မှာ​ပဲ .. ပြန်လာ​မယ်​လို့ မ​ထင်​ဘူး … ဒါ​ကြောင့် မင်းကို Visa ထုတ်​မ​ပေး​နိုင်​ဘူး” တဲ့ … အဲ​ဒီ​မှာ​တင် ကျွန်မ သင်​ခန်း​စာ ရ​လိုက်​တယ် .. အမှန်​အတိုင်း​ပြော​တာ ဒီ​လို​နေရာ​မှာ​ကျ​တော့ မ​ကောင်း​ဘူး​ဟ .. ဆို​ပြီး .. ကျွန်မ မလိမ်​တတ်​ဘူး​လေ ၊ လုပ်​မယ့် အကြောင်းအရာ​ကို မ​ကွယ်​မ​ဝှက်​ဖြေ​တယ်။ ဖြေ​တော့ Visa Refused လုပ်​ခံ​ရ​တယ်.။
– အမေ​ရိ​ကန် သံ​ရုံး​က​နေ Passport လေးကိုင်​ပြီး ပြန်​ထွက်​လာ​တဲ့​အခိုက် ကျွန်မ မျက်​ဝန်း​ထဲ​မှာ မျက်ရည်​တွေ ပြည့်​လျှံ​နေ​ခဲ့​တယ်။ မဟာ​ဗန္ဓု​လ​ပန်းခြံ​အရှေ့ ကုန်သည်​လမ်းမ​ကြီးပေါ်​မှာ ကား​တွေ အားလုံး​တန်း​စီ​ရပ်​လိုက်​ရ​တယ် .. ကျွန်မ ဘယ်​ကား​ကို​မှ မ​ကြည့်​ဘဲ တန်း⁠တန်း​ကြီး လမ်း​ဖြတ်​ကူး​နေ​ခဲ့​မိ​တယ်။ ။ ကျွန်မ မျက်လုံး​ထဲ ဘာ​မှ မ​မြင်​တော့​ဘူး ။ ။ ဘဝ​မှာ​လည်း နှစ်​ခါ လုပ်​ပြီး​မှ ရ​တဲ့ အရာ တစ်​ခု​မှ မ​ရှိ​ခဲ့​တော့ .. US Student Visa အငြင်း​ခံ​လိုက်​ရ​တာ ကျွန်မ​ဘဝ​ရဲ့ အကြီး​မား​ဆုံး မျှော်လင့်​ချက်​ကြီး ဆုံးရှုံး​သွား​သ​လို ခံစား​ခဲ့​ရ​တယ်။
ကျွန်မ အဲ​ဒီ​အချိန်​နေ့​က​စ​ပြီး .. ထမင်း​မ​စား​နိုင်၊ အိပ်​မပျော်​နိုင်​ဘဲ ၊ အိပ်​ယာ​ထဲ​လှဲ​ပြီး မျက်ရည်​တွေ တ​တွင်တွင်​စီး​ကျ​လို့ … စိတ်ကျ​ခြင်း​ဆို​တဲ့ ခံစား​မှု​ကို စတင်​ခံစား​ခဲ့​ရ​တယ်။
မေမေ​ရဲ့ အားပေး​စကား ~~~
“သမီး … တစ်​ခါ​ဝင်​ကြည့်​တယ် ..လိုချင်​တဲ့ ဗီဇာ မ​ရ​ဘူး .. အတွေ့​အကြုံ​ရ​လိုက်​တယ်။ တန်​တယ်။ အတွေ့​အကြုံ​ဆို​တာ ဒီ​လို​များ​များ ရင်ဆိုင်​မှ ခံ​နိုင်​ရည်​ရှိ​တာ။ နောက် (၆)လ စောင့်​ပြီး​ရင် ဗီဇာ​ထပ်​ဝင်​မယ် … အား​တင်း​ထား ၊ စိတ်​ဓါတ်​မ​ကျ​နဲ့ .. သမီး​ကို မေမေ အမေ​ရိ​ကား ရောက်​အောင်​ပို့​မယ် … အဲ​ဒါ မေမေ့ ရည်​မှန်း​ချက်​ပဲ”…
(၂)ပတ်​အကြာ​မှာ .. ကျွန်မ Back to Normal Life ကို ပြန်​ရ​ခဲ့​တယ် …
လဲကျ​နေ​တဲ့ နေရာ​က​နေ ကုန်း​ပြီး ပြန်​ထ​နိုင်​ခဲ့​တယ်။
Written by “သမီး​ဆိုး”
Credit to “သမီး​ဆိုး”
Next post အသစ်​ထုတ်​လုပ် ရောင်းချ​မည့် စ​မတ်​ဖုန်း​တွင် Nokia ၏ အမည်​ကို ဖယ်ရှား​ရန် Microsoft ဆုံးဖြတ်
Previous post ကျွန်​မမျော်​လင့်​ခဲ့​သော​နိုင်ငံ​ခြား​အပိုင်း(၂)